शीर्ष १० स्वास्थ्य लाभहरू तपाईंको लागि ग्लुटाथियोन पूरकको - विस्पाउडर
शीर्ष १० स्वास्थ्य लाभ तपाईंको शरीरको लागि ग्लूटाथियोनको
ग्लुटाथियोन लाभ एन्टिऑक्सिडन्टको रूपमा अभिनय गरेर विभिन्न तरिकामा जीवित जीवहरू। यो मानव मानव कोषमा उपस्थित अमीनो एसिड यौगिक हो। प्रत्येक जीवित जीवको शरीरमा ग्लुटाथियोन हुन्छ। यो एक शक्तिशाली एन्टिआक्सिडन्ट हो जुन पर्याप्त स्तरमा हुँदा हामीलाई खतरनाक स्वास्थ्य अवस्थाबाट जोगाउन सक्छ अल्जाइमर रोग, हृदय रोग, र स्ट्रोक।
यद्यपि यो एन्टिआक्सीडन्ट हाम्रो शरीरको कोशिकामा उत्पादित हुन्छ ग्लुटाथियोन हाम्रो शरीरमा इन्जेक्सन गर्न सकिन्छ, topically लागू गर्न सकिन्छ, वा इनहेलेन्टको रूपमा।
ग्लुटाथियोन भनेको के हो?
ग्लुटाथियोन तीन अमीनो एसिडको संयोजनबाट गठन गरिएको एक यौगिक हो: सिस्टिन, ग्लुटामिक एसिड, र ग्लाइसिन, यो एक शक्तिशाली एन्टिआक्सिडन्ट हो जसले कोषहरूको बुढ्यौललाई रोक्छ र ढिलाइ गर्दछ। ग्लुटाथियोनले कोषहरूलाई क्षति हुनबाट बचाउँछ र कलेजोमा हानिकारक रसायनहरूलाई डिटक्सिफाइ गर्दछ र शरीरमा सजिलैसँग निकास गर्न मद्दत गर्ने ड्रग्समा आफैंलाई बाँध्न सक्ने क्षमता छ। यसले शरीरको प्रतिरोध क्षमता बढाउन र हाम्रो शरीरमा कोषहरूको वृद्धि र मृत्युलाई नियन्त्रण गर्न महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दछ। ग्लुटाथियोनको स्तर बुढेसकालको साथ कम गर्न ध्यान दिइयो।
1. ऑक्सीडेटिव तनाव कम गर्दछ
जब शरीरमा स्वतन्त्र रेडिकलको उत्पादन बढ्छ, र शरीरले उनीहरूलाई रोक्न सक्दैन, यसले परिणामहीन तनाव निम्त्याउँछ। अक्सिडेटिभ तनावको उच्च स्तरले शरीरलाई मधुमेह, संधिशोथ, र क्यान्सर जस्ता मेडिकल अवस्थाको लागि अति नै संवेदनशील छोड्छ। ग्लुटाथियोनले अक्सिडेटिभ तनाव कम गर्न मद्दत गर्दछ जसले शरीरलाई यी व्याधाहरू रोक्न सहयोग गर्दछ।
शरीरमा ग्लुटाथियोनको उच्च स्तरलाई पनि यसको स्तर वृद्धि गर्न जानिन्छ एंटीऑक्सिडेंट। ग्लुटाथियोनसँगसँगै एन्टिआक्सिडन्टहरूको यो वृद्धिले ऑक्सीडेटिव तनाव कम गर्दछ।
2. मुटुको स्वास्थ्य सुधार गर्न सक्छ
ग्लूटाथियोन, मानव शरीरमा फ्याटको अक्सिडाइजेसन रोक्न सक्ने क्षमताको साथ, हृदयघात र अन्य हृदय रोगहरूको घटनाहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ। धमनीको पर्खालहरूको भित्रपट्टि धमनी पट्टिकाको स by्ग्रहले मुटु रोगहरू हुन्छ।
कम घनत्वको लिपोप्रोटीन (LDL), वा खराब कोलेस्ट्रोल, धमनीहरूको आन्तरिक अस्तरलाई बिगार्दै पट्टिकाको कारण दिन्छ। यी प्लेकहरू टुक्रिएका छन् र रक्त नलीहरू ब्लक गर्न सक्छन्, रगत प्रवाह रोक्न र हृदयघात र स्ट्रोकको कारण।
ग्लुटाथियोन, ग्लुटाथियोन पेरोक्साइडस भन्ने एन्जाइमको साथसाथै सुपरऑक्साइडहरू, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फ्रि रेडिकल र लिपिड पेरोक्साइडहरूलाई वशमा गर्दछ जसले लिपिड ऑक्सीकरण (फ्याट ऑक्सीकरण) निम्त्याउँछ। यसले खराब कोलेस्ट्रोललाई रक्त नलीहरूलाई क्षति गर्नबाट रोक्छ त्यसैले पट्टिको गठनलाई। यसैले ग्लुटाथियोनले हृदयघात र अन्य हृदय रोगहरूको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
3. मादक र फ्याटि लिवर रोगमा कलेजो कोषहरूलाई बचाउँछ
जब त्यहाँ एन्टीआक्सीडन्ट र ग्लुटाथियोनको कमी हुन्छ, अधिक कलेजो कोषहरू मर्दछन्। यसले कलेजोको बोसोयुक्त फ्यादर र अल्कोहल लिवरको बिरूद्ध लड्न सक्ने क्षमतालाई घटाउँछ। ग्लुटाथियोन, जब पर्याप्त स्तरहरूमा उपस्थित हुन्छन् रगतमा प्रोटिन, बिलीरुबिन, र एन्जाइमको स्तर बढाउछ। यसले व्यक्तिहरूलाई फ्याट्टी र मादक पदार्थको कलेजो रोगहरूबाट छिटो पुन: प्राप्ति गर्न मद्दत गर्दछ।
एक उच्च ग्लुटाथियोन डोज वसायुक्त कलेजो बिरामी भएकाहरूलाई अन्तःशिरा द्वारा संचालितले देखायो कि ग्लुटाथियोन यो रोगको सबैभन्दा प्रभावकारी उपचार थियो। यसले कलेजोमा कोष बिगार्ने मार्कर, मलोन्डियालहाइडमा पनि पर्याप्त ह्रास देखायो।
मौखिक रूपमा प्रशासित ग्लुटाथियोनले यो पनि देखायो कि एन्टिऑक्सिडन्टले नौं-अल्कोहोलिक फ्याट लिभर रोगमा पीडित व्यक्तिहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
4. मुद्रास्फीतिसँग लड्न मद्दत गर्दछ
मुद्रास्फीति मुटु रोगहरू, मधुमेह, र क्यान्सर जस्ता प्रमुख रोगहरूको प्रमुख कारणहरू मध्ये एक हो।
एक चोटपटकको कारण घाइते क्षेत्रमा रगत वाहिनाहरू विस्तार हुने क्रममा यस क्षेत्रमा बढी रगत बग्न सकोस्। यो रगत प्रतिरक्षा कोषहरूले भरिएको छ जुन संक्रमणको कुनै पनि सम्भावनालाई रोक्नको लागि यस क्षेत्रमा बाढी आउँछ। एक पटक घाइते क्षेत्र निको भयो, सूजन कम हुन्छ र प्रतिरक्षा कोषहरूको संख्या कम हुन्छ। तर तनाव, विष, अस्वस्थ आहारबाट प्रभावित एक अस्वस्थ शरीरमा मुद्रास्फीति छिटो कम हुँदैन।
ग्लुटाथियोनले यस्ता प्रतिरक्षा सेता कोशाहरूलाई बढावा दिई यस्तो अवस्थामा मद्दत गर्दछ। उनीहरूले सेता कोषहरूको संख्या नियन्त्रण गर्छन् जुन मुद्रास्फीतिको गम्भीरतामा भर पर्छन्।
5. इन्सुलिन प्रतिरोध सुधार गर्दछ
जब हामी ठूलो हुँदै जान्छौं हाम्रो शरीरमा ग्लुटाथियोनको स्तर कम हुन्छ किनकि हाम्रो शरीरले कम र कम ग्लुटाथियोन उत्पादन गर्दछ। यसले कममा परिणाम दिन्छ वोसो जलिरहेको हाम्रो शरीर मा। यसैले शरीरले थप फ्याट भण्डार गर्दछ। यसले इन्सुलिनको लागि अति संवेदनशीलता पनि बढाउँदछ।
एक आहार जसले सिस्टिन र ग्लाइसिनको स्तर बढाउँदछ त्यसले हाम्रो शरीरमा उत्पादन ग्लुटाथियोन पनि बढाउँदछ। ग्लुटाथियोनको यो उच्च उपस्थितिले ठूलो इन्सुलिन प्रतिरोध र उच्च फ्याट बर्नमा मद्दत गर्दछ।
6. परिधीय संवहनी रोग बिरामीहरूले सुधारिएको गतिशीलता देख्दछन्
पेरिफेरल धमनी रोगले मानिसहरुलाई पीडित गर्छ जसको धमनीहरू पट्टिकाले भरिएका हुन्छन्। यो रोगले प्रायः व्यक्तिको खुट्टालाई असर गर्छ। यो तब हुन्छ जब अवरुद्ध रक्त नलीहरूले मांसपेशियोंलाई रगतको आवश्यक रकम आपूर्ति गर्न असमर्थ हुन्छ जब मांसपेशाहरूलाई आवश्यक पर्दछ। परिधीय संवहनी रोगबाट पीडित व्यक्तिले हिंड्दा पीडा र थकान अनुभव गर्दछ।
ग्लुटाथियोन, दिनको दुई चोटि नापद्वारा प्रशासित, तिनीहरूको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखायो। व्यक्ति लामो दूरी सम्म हिंड्न सक्षम थिए र कुनै पीडा को गुनासो छैन।
7. छालाका लागि ग्लुटाथियोन
ग्लुटाथियोन फाइदाहरू स्वस्थ छाला कायम राख्न र यसको उपचार गर्न विस्तार गर्दछ। एक्ने, छाला ड्राईनेस, एक्जिमा, झुर्रीहरू, र फुसिलो आँखा उपयुक्त ग्लुटाथियोन खुराकको साथ उपचार गर्न सकिन्छ।
छालाका लागि ग्लुटाथियोनको प्रयोग टायरोसिनेजलाई रोक्छ, एन्जाइमले मेलानिन उत्पादन गर्दछ। लामो अवधिको लागि ग्लुटाथियोनको प्रयोगले हल्का छालामा कम मेलानिनको उत्पादनको परिणाम दिनेछ। यो छालरोग कम गर्न, छालाको लोच सुधार, र झिम्का कम गर्न पनि देखाइएको छ।
8. पार्किन्सन रोगको लक्षणहरू कम गर्दछ
कंपका लक्षणहरू मध्ये एक हो जुन मानिसहरूले पीडित छन् पार्किंसंस रोग सामान्यतया पीडित। त्यो किनभने केन्द्रीय स्नायु प्रणाली को लागी यो रोग ग्रस्त छ। ग्लुटाथियोनको इन्टरभेन्सस प्रशासनले यस रोगका व्यक्तिहरूमा सुधार देखायो। उपचारले अवलोकनको क्रममा बिरामीहरूलाई थरथर काँप्ने र कठोरता घटायो। यो विश्वास छ कि ग्लुटाथियोनले पार्किन्सन रोगबाट पीडित व्यक्तिहरूको लागि बिरामी शोका लक्षणहरू घटाएर जीवन सजिलो बनाउन सक्छ।
9. अक्सिडेटिभ क्षति घटाएर अटिस्टिक बच्चाहरूलाई मद्दत गर्दछ
अटिजम भएका बच्चाहरूका दिमागमा उनीहरूको उच्च स्तरको अक्सीड्याटिभ क्षति हुने देखाइन्छ। उही समयमा, ग्लुटाथियोनको स्तर धेरै कम छ। यसले जोखिम बढायो कि बच्चाहरूलाई पारा जस्ता रसायनले न्युरोलॉजिकल क्षति पुर्‍याउँछ।
मौखिक र सामयिक ग्लुटाथियोन डोजको साथ उपचार गरिएको बच्चाहरूले प्लाज्मा सल्फेट, सिस्टिन र रगत ग्लुटाथियोनको स्तरमा उल्लेखनीय सुधार देखायो। यसले आशा प्रदान गर्दछ कि ग्लुटाथियोन उपचारले मस्तिष्कको कार्यप्रणाली सुधार गर्न सक्छ र त्यसैले, आत्मकेंद्रित बच्चाहरूको जीवन।
10। स्वचालित प्रतिरक्षा रोगहरु संग लड्न मद्दत गर्न सक्छ
स्वत: प्रतिरक्षा रोगहरूले सेलिआक रोग, गठिया, र ल्युपस सामिल छन्। यी रोगहरूले पुरानो सूजन र पीडा निम्त्याउँछ जुन अक्सिडेटिभ तनावलाई बढाउँदछ। ग्लुटाथियोनले या त उत्प्रेरित गरेर वा यसलाई घटाएर शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता नियन्त्रण गर्न सक्छ। यसले चिकित्सकहरूलाई स्वत: प्रतिरोधात्मक क्षमताका विकारहरू पीडित व्यक्तिहरूमा अक्सिडेटिभ तनाव कम गर्न दिन्छ।
स्वत: प्रतिरक्षा रोगहरूले केही सेलहरूमा सेल mitochondria नष्ट गर्दछ। ग्लुटाथियोनले फ्रि रेडिकलहरूसँग लडेर सेल माइटोकन्ड्रियालाई बचाउन मद्दत गर्दछ। ग्लुटाथियोन सेतो कोषहरू र टि कोशिकाहरूलाई उत्तेजित गर्दछ जुन संक्रमण बिरूद्ध लड्छ। ग्लुटाथियोनद्वारा प्राइम गरिएको टी कोषहरूले ब्याक्टेरिया र भाइरल संक्रमणको विरूद्ध लड्न क्षमता बढेको देखायो।
जसरी शरीर ठूलो हुँदै जान्छ, शरीरमा ग्लुटाथियोनको स्तर घट्छ। हामीले खाना खानु पर्छ जसले शरीरलाई ग्लूटाथियोनको स्तर पुनःप्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ धेरै फूडहरू छन् कि या त ग्लुटाथियोन प्राकृतिक हुन्छ वा ग्लुटाथियोन बुस्टि boo पोषक तत्वहरू।
जहाँसम्म ग्लुटाथियोन फूडहरू जान्छ, मट्ठा प्रोटीनमा गामा-ग्लुटामाइलसिस्टीन हुन्छ। त्यो ग्लुटाथियोन र सिस्टिनको संयोजन हो जसले हाम्रो शरीरलाई दुई एमिनो एसिडहरू छुट्याउन सजिलो बनाउँदछ। ती दुबै राम्रा एन्टीआक्सीडन्टहरू हुन्।
· Allium खाद्य पदार्थ
राम्रो ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्टहरू अल्लियम जीनसको स्वामित्वमा भएका बोटबिरुवाबाट हुने खाना हुन्। सल्फरले हाम्रो शरीरलाई बढी प्राकृतिक ग्लुटाथियोन उत्पादन गर्न मद्दत गर्दछ। प्याज, लसुन, स्केलियन्स, चाइभ्स, सुलभ र लीकहरू खाद्य पदार्थहरू हुन् जुन अलियम जीनससँग सम्बन्धित छ।
· क्रिस्कृतिक सब्जिहरु
क्रूसिफेरस तरकारीहरूमा ग्लुकोसिनोलेट हुन्छ जसले तपाईंको शरीरमा ग्लुटाथियोन स्तरलाई बढावा दिन्छ। त्यसकारण यी तरकारीहरू बोकेका बोटहरूमा गन्धकको गन्ध छ।
बन्दकोबी, फूलगोभी, ब्रोकोली, काल, बोक चय, ब्रसेल्स ट्राउन्ट, अरुगुला, मूली, वाटरक्रिस, र कोलार्ड सागहरू सबै क्रूसिफेरस तरकारीहरू हुन्।
· अल्फा- lipoic एसिड भएको खाद्य पदार्थ
गाईको मासु, अंग मासु, पालक, ब्रुभरको खमीर, र टमाटर राम्रो ग्लुटाथियोन पूरक हुन् किनकि तिनीहरू धनी छन्। अल्फा- lipoic एसिड। यो एसिडले तपाईंको शरीरमा ग्लुटाथियोनको स्तरलाई पुन: उत्पन्न र बढाउँदछ।
· सेलेनियम समृद्ध खाद्य पदार्थ
ट्रेस खनिज सेलेनियमले शरीरलाई ग्लूटाथियोन र अन्य एन्टिआक्सिडन्टहरूको स्तर बढाउन मद्दत गर्दछ। सेलेनियम युक्त खानाहरू कस्तूरा, समुद्री खाना, अण्डाहरू, ब्राजिल पागल, शतावरी, च्याउ, र सम्पूर्ण अन्नहरू हुन्।
ग्लुटाथियोन पूरक विभिन्न रूपहरु मा आउन। ती मौखिक रूपमा लिन सकिन्छ। तर मौखिक रूपमा लिईएको ग्लुटाथियोन यौगिकको शरीरको स्तरहरू पूरित गर्न त्यति प्रभावकारी हुँदैन।
ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्ट लिनको उत्तम तरिका भनेको खाली पेटमा लिपोसोमल ग्लुटाथियोन लिनु हो। सक्रिय ग्लुटाथियोनको एक घटक लाइपोसोमको बीचमा निहित हुन्छ। यो पूरक मौखिक रूपमा लिनु भनेको शरीरको ग्लुटाथियोन स्तर बढाउने उत्तम तरिका हो।
ग्लुटाथियोन पनि एक विशेष नेबुलाइजरसँग सास गर्न सकिन्छ। तर तपाईंलाई यसको प्रयोगको लागि पर्ची चाहिन्छ।
ट्रान्सडर्मलहरू र लोशनहरू उपलब्ध छन् जुन शीर्ष रूपमा लागू गर्न सकिन्छ। तिनीहरूको शोषण दर परिवर्तनशील छ र कहिलेकाँही अविश्वसनीय हुन सक्छ।
इन्ट्राभेनस एडमिनिस्ट्रमेसन ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्ट लिनको सबैभन्दा सिधा तरीका हो। यो पनि सबैभन्दा आक्रामक तरीका हो।
ग्लुटाथियोन साइड इफेक्ट
ग्लुटाथियोन पूरकको साइड इफेक्ट विरलै हुन्छ। यी फुलेको देखि हुन सक्छ। पेटको ऐंठन, ग्यास। छाडा मल, र सम्भावित एलर्जी प्रतिक्रियाहरू। ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्ट लिनु अघि तपाईको चिकित्सकसँग सल्लाह गर्नु राम्रो हुन्छ।
एक व्यक्ति को लागी आवश्यक ग्लुटाथियोन खुराक एक व्यक्तिको उमेर, वजन, र शरीरविज्ञान मा भिन्न हुन सक्छ। यो उसको स्वास्थ्य अवस्था र चिकित्सा ईतिहासमा पनि निर्भर हुन सक्छ। तपाईले कुन पूरक खुराक लिनुपर्दछ भनेर जाँच गर्न तपाईको चिकित्सकसँग सल्लाह गर्नु राम्रो हुन्छ।
ग्लूटाथियोन हाम्रो शरीरमा एक महत्त्वपूर्ण अणु हो। यो एक शक्तिशाली एन्टीआक्सीडन्ट हो र शरीरलाई स्वतन्त्र रेडिकलमा जाँच राख्न मद्दत गर्दछ। यसले हामीलाई स्वस्थ राख्छ र हृदय समस्याहरू, क्यान्सर, र हृदयघात जस्ता रोगहरूको वार्ड।
हाम्रो शरीरमा ग्लुटाथियोनको अधिकतम स्तर कायम गर्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यहाँ हामी विभिन्न तरिकाले गर्न सक्छौं। हामी ग्लुटाथियोन समृद्ध आहार खान सक्दछौं, ग्लुटाथियोन मौखिक लिन सक्नुहुन्छ, यसलाई लागू गर्नुहोस् शिरा भित्र-भित्र आउँदछन्।
जब तपाईं ग्लुटाथियोन सप्लीमेन्ट लिने निर्णय गर्नुहुन्छ शरीरमा यसको स्तर परिवर्तन गर्न को लागी चिकित्सा सल्लाह लिनुहोस्।
रुहीर एन, लेमेयर एसडी, जैकट जेपी (२०० 2008) "प्रकाश संश्लेषक जीवहरूमा ग्लुटाथियोनको भूमिका: ग्लुटेरेडॉक्सिन र ग्लुटाथियोनिलेसनको लागि उभरिरहेका कार्यहरू"। प्लान्ट जीवविज्ञानको वार्षिक समीक्षा। (((१): १––––।
फ्रान्को, आर; Schoneveld, OJ; पप्पा, ए; Panayiotidis, MI (2007) "मानव रोगहरूको पाथोफिजियोलोजीमा ग्लुटाथियोनको केन्द्रीय भूमिका"। शरीर विज्ञान र जीव रसायन अभिलेखागार। ११113 (–-–): २–––२4।।
१. ग्लुटाथियोन भनेको के हो?
ग्लुटाथियोनको २ लाभ
G.ग्लुटाथियोन साइड इफेक्ट
रातो खमीर चामल एक्स्ट्रक्ट पूरकहरू: लाभ, खुराक र साइड इफेक्टहरू